Amaphrofayli we-Pultrusion Abakhiqizi & Abahlinzeki - China Amaphrofayli wePultrusion Factory
I-China Factory eyenziwe ngokwezifiso ye-FRP fiberglass Grating Yokwakha
Ingilazi ye-fiber fiber eqiniswe ngeplastiki (i-FRP) ne-glass fiber iqiniswe ipuleti lepulasitiki, luhlobo lwengilazi eqinisiwe yempahla, i-resin ye-polyester engafakwanga njenge-matrix, ngokucutshungulwa okukhethekile futhi yaba uhlobo lwento yepuleti, enezikhala eziningi ezingenalutho i-FRP gratings ingaba isetshenziswe njengezinto zokwakheka, ezisetshenziselwa phansi imvelo yokugqwala, ikhava yomsele, ipulatifomu, ipaki lomkhumbi, isiteji, imigwaqo yezinkuni, njll. Ngokumelana nokugqwala kanye nelangabi elinciphisa ilangabi, ukwahlukanisa okungenamandla kazibuthe, ...
I-FRP Purlin Construction Purpose Purlin Intengo
Isicelo 1). Ama-purlins, imishayo yodonga ekwakhiweni kwensimbi 2). Kuhlanganisiwe ekwakhiweni ngokwazo njengemithamo yophahla engasindi, kubakaki, njll. 3). Amakholomu, imishayo nezingalo ekukhiqizeni imishini yokukhanyisa embonini Izici Eziyinhloko Ukubukeka kwemvelo nokungasheleli: Isihlabathi semvelo singangezwa ebusweni ngokubukeka kwemvelo nomphumela ongasheleli. Corrosion nokuguga ukumelana: Umehluko izakhiwo inhlaka unikeza zu a ezahlukene ukugqwala ukumelana, futhi kungaba u ...
Iphosta Ehlanganisiwe ye-Fiberglass I-Beam Profile
1. Ikhwalithi ephezulu Siqinisekisa ukuthi yonke imikhiqizo ingaphansi kokuhlolwa okuningi ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ngaphambi kokuthi zilethwe. 2. Intengo Yokuncintisana Intengo iyahlukahluka ngokuya ngezidingo zomkhiqizo nobungako bezinto. 3. Isici esivelele kakhulu senkampani yethu iqembu lethu lesayensi nobuchwepheshe. 4. Insiza Enhle Kakhulu kuyo yonke imibuzo yakho ngathi noma ngemikhiqizo yethu, sizokuphendula ngokuningiliziwe kungakapheli amahora angu-12. 5.Imikhiqizo Yokufaka Nokulethwa ingapakishwa futhi ish ...
GRP Pultruded fiberglass Amafomu fiberglass Tube Sakhiwo FRP nehele Pultrusion Isigaba / Iphrofayili
I-pultrusion inqubo eqhubekayo esebenzisa ukuqiniswa kwe-fiber nge-thermosetting resin matrices. Izinto zokuqinisa ezikhethwe ngaphambili, njenge-fiberglass roving, umata, izindwangu ezilukiwe noma indwangu ethungiwe, zidwetshelwa kubhavu we-resin lapho konke okokusebenza kufakwe khona i-resin ye-liquid thermosetting. Izinhlaka ezijwayelekile zifaka ama-polyesters, ama-vinyl esters nama-phenolics. I-fiber emanzi yakhiwa yohlobo olufunekayo lwejometri futhi yadonswa kufini yensimbi evuthayo. Uma usungaphakathi kwediski, i ...
Izinto Zokwakha U Isiteshi Sensimbi Esivela Ensimbi Yemboni Yensimbi
Insimbi yesiteshi iyinsimbi ende yomumo enengxenye yesiphambano yomumo we-groove. Insimbi yesiteshi ingeyokusetshenziswa kwesakhiwo nokusetshenziswa komshini insimbi eyakhiwe ngesakhiwo, iyinsimbi eyingxenye eyinkimbinkimbi, ukwakheka kwesigaba sayo kubekiwe. Insimbi yesiteshi isetshenziselwa kakhulu ukwakha isakhiwo, ubunjiniyela bamakhetheni, okokusebenza kwemishini nokwenziwa kwezimoto, njll.Ukulethwa kwensimbi yomkhiqizo ophelile ngomshini wokwakheka nokushisa noma isimo esishisayo. Izinzuzo Zethu 1. Ikhwalithi ephezulu ne-reasona ...
Ikhwalithi Ephakeme ye-FRP Angle / I-Glass Fibre Angle / I-Angle Yensimbi
Imisebe yamapulasitiki eqinile enamandla angaphezulu kakhulu.Okokuqala, sikhetha imikhiqizo edumile yamaShayina ukuqinisekisa ikhwalithi ye-FRP. Okwesibili, ugongolo lwengilazi alukwazi nje kuphela ukumelana nemithwalo emile, kepha futhi nengcindezi yomthwalo onamandla. emishayweni ye-FRP eyenziwe yinkampani yethu.Lapho ukusikeka kokugoba kufinyelela ku-1 cm, ingcindezi yasetshenziswa kugongolo lwe-FRP.Faka izikhathi ezingama-50 ngephuzu ngalinye, uqhubeke usebenzise izikhathi ezingama-3,000 ngaphandle kokuphazamiseka, futhi uphumelele isivivinyo njenge-q ...